चिली: प्रदर्शनमा १0,000 मौरीहरू सहभागी, ७ प्रहरीलाई चकित; वास्तविकता के त? – www.agnijwala.com
चिली: प्रदर्शनमा १0,000 मौरीहरू सहभागी, ७ प्रहरीलाई चकित; वास्तविकता के त?
सान्टियागो : चिलीको राष्ट्रपति भवन अगाडि यस्तै एक प्रदर्शन भएको छ, जसमा मौरी पनि सहभागी भएका छन् । यस क्रममा मौरीले कम्तीमा सात प्रहरीलाई आफ्नो शिकार बनाए । त्यसपछि उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजानुपरेको थियो । वास्तवमा चिलीमा खडेरीका कारण मह उत्पादनमा असर परेको छ, फूल र बाली जस्ता मौरीका खाद्यान्न स्रोतहरू पनि सुकेका छन्। यस विषयमा सोमबार मौरीपालकहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीहरूले आफूसँगै धेरै बाकसहरू ल्याएका थिए जसमा मौरीहरू थिए।
जलवायु परिवर्तन पनि जिम्मेवार छ
सीएनएनको रिपोर्ट अनुसार मौरीको टोकाइबाट कम्तीमा सात प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रहरीले चारै जना आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । चिलीमा खडेरी कुनै नौलो कुरा होइन, तर यसपटक अवस्था निकै खराब बनेको छ । सन् २०१० देखि स्थिति सामान्यमा फर्किएको छैन। वैज्ञानिकहरूले यसको लागि आंशिक रूपमा जलवायु परिवर्तनलाई दोष दिइरहेका छन्। खडेरीले आवाजविहीनका साथै मानिसको पेट भर्ने समस्या सिर्जना गरेको छ । सोही कारण चार मौरीपालकले आफ्ना मागलाई लिएर राष्ट्रपति भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
यस्ता छन् माहुरीपालकको माग
मौरीपालन व्यवसायीहरुले महको मूल्यमा सुधार गर्नुपर्ने वा मह उत्पादकलाई अनुदान दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनी राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरासँग भेट्न चाहन्छन्, ताकि उसलाई आफ्नो स्थितिबारे जानकारी गराउन सकियोस्। प्रदर्शनकारीले करिब १० हजार मौरी भएका ६० वटा बाकस ल्याएका थिए । एक प्रदर्शनकारी जोसे इटुराले स्थानीय पत्रकारहरूलाई भने कि स्यान्टियागोको उत्तरी भागमा रहेको कोलिना कम्युनमा खडेरीका कारण मौरीहरू मरिरहेका छन्, जुन उनको लागि मात्र नभई समग्र वातावरणका लागि खतरनाक छ। यो सबैको अगाडि राख्नको लागि हामी प्रदर्शन गर्न आएका हौं।
विश्वभर जनसंख्या घट्दै
यसैबीच कृषि मन्त्रालयका एक प्रतिनिधिले खडेरीले मौरीमा पर्ने असरप्रति सरकार चिन्तित रहेको बताए । उनले महिनौंदेखि खानेपानीको चरम अभावमा परेका २० समुदायलाई सरकारले सहयोग गर्दै आएको बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी र बढ्दो तापक्रमले विश्वभर माहुरीको जनसंख्यालाई असर गरेको छ भनी व्याख्या गर्नुहोस्। गत वर्ष साइन्स जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनले उत्तरी अमेरिकामा ५० प्रतिशत र युरोपमा १७ प्रतिशतले गिरावट आएको बताएको थियो।